January 2017 - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
Thiha Htike at 4:33:00 PM 0
Android Tool Mobile Tutorials Xiaomi
Thiha Htike at 3:15:00 PM 0
အပေါ်ကအတိုင်းဖြစ်နေရင်ဖြေရှင်းနည်းလေးပါ ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်တင်တဲ့ပို့စ်တွေက ကျွန်တော်စမ်းတာရှိသလိုသူများစမ်းတာကိုပြန်တင်ပေးတာလည်းရှိတယ် ။
For Window 32bit only
1.အရင်ဆုံး Fastboot mode မှာဖုန်းကို usbနဲ့pcနဲ့ချိတ်လိုက်ပါ။
2.bat file လေးကေို အောက်မှာ Download လုပ်ပါ Edl mode ရောက်ပါပြီ။
3.ရေးဖို့ flashtool ကိုဒေါင်းလိုက်ပါအုံး။
4.flashtool ကိုဖွင့်ပါ ပြီးရင် firmware ရွှေးပါ ပြီးရင် flashလိုက်ပါ။
အောက်မှာလည်း video file လေးတင်ပေးထားပါတယ်။
Download Full Flash Firmware
Note: This phone can not be flashed via fastboot as its locked bootloader so
you can only flash via EDL mode
အောက်မှာ Video File ထည့်ပေးထားပါသေးတယ်။
Browser Computer software
Maung Pauk at 3:12:00 PM 0
Windows PC သမားတွေအတွက် နောက်ဆုံးထွက် Firefox Browser for Windows 51.0.1 ဖြစ်ပါတယ်..
Download Firefox 51.0.1.exe : 45 Mb
Firmware Micro Max Phone Application
Maung Pauk at 2:56:00 PM 0
ရှာဖွေရခက်တဲ့ Micro Star3Firmware ကို Free Download ရယူနိုင်ပါပြီ..
Micro Star3Firmware Free Download : 348 Mb
Error Solution Files Oppo Phone Application
Maung Pauk at 2:42:00 PM 0
Oppo R831K Ver:4.2.2 firmware ရေးတာ Touchသေသွားတယ် Touch ပြန် Fixတယ် lcd လစ်ပြန်ကော အဲလိုနဲ့ လယ်နေတာ ခုတော့ ok ပါပြီ touchကော lcd ကော ..
Flashtool နဲ့ တင်လိုက်ပါ..
Credit : Min Min Soe
Oppo R831K Touch & LCD Fix File : 10.6 Mb
Maung Pauk at 2:22:00 PM 0
Qualcomm CPU ကို သုံးထားတဲ့ Xiaomi Phone model တွေအတွက် Mi Flash Tool နဲ့ Firmware တင်လို့ အဆင်မပြေတွေဖြစ်လာတာမျိုးရှိရင် Qualcomm ရဲ့ Tool တစ်ခုဖြစ်တဲ့ QFIL (Qualcomm Flash Image Loader) နဲ့ တင်ကြည့်မယ်ဗျာ။ သူက Windows 32bit ကို အဓိက Base လုပ်ထားတာပါ။ Windows 64bit မှာလည်း အဆင်ပြေပြေ သုံးလို့ရပါတယ်။ ကိုယ့် Windows က 32bit ဖြစ်နေလို့ တော်တော်များများ အဆင်ပြေတဲ့ Mi Flash 64bit ကို မသုံးနိုင်တဲ့အခါတွေ၊ Windows က .NET Framework error ကြောင့် အခြား Mi Flash Tool နှစ်ခုကို မသုံးနိုင်တဲ့ အခါမှာ သည် QFIL လေးနဲ့စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သုံးရတာလည်း Mi Flash Tool ထက်ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။
Computer မှာ လိုအပ်တဲ့ Phone Drivers file တွေ Install လုပ်ထားပြီးသားဖြစ်နေရပါမယ်။ သည်နေရာမှာ [ PC Driver Installation for Xiaomi Phones ] လေ့လာကြည့်ပြီး Driver install လုပ်ပါ။ Adb, Fastboot, EDL mode တွေမှာ အလုပ်လုပ်မလုပ် စစ်ဆေးကြည့်ထားပါ။
ပြီးရင်တော့ ကိုယ်တင်ချင်တဲ့ Latest Fastboot ROM ကို Download ပြုလုပ်ထားပြီး ကွန်ပျူတာမှာ ဖြည်ချထားရပါမယ်။ Download လုပ်ဖို့အတွက်ဝင်ဖို့ link၊ ကွန်ပျူတာမှာ ဖြည်ချထားပြီး ပြင်ဆင်ပေးရပုံတွေကို သည်နေရာမှာ [ Preparation for Fastboot ROM to Flash with Mi Flash Tool ] လေ့လာထားပြီး ပြင်ဆင်ပေးပါ။
နောက်ဆုံးလိုအပ်တာကတော့ Qualcomm Tool ပါပဲ။ သည်နေရာမှာ [ Qualcomm QPST Download Link ] Download ပြုလုပ်ပါ။ ကွန်ပျူတာမှာ Install လုပ်ပါ။ မေးလာတာတွေမှာ Next, Next, OK တွေသာ နှိပ်ပေးရုံပါ။
QPST ကို Install လုပ်ပြီးရင်တော့ C:\_Program Files (x86)\_Qualcomm\_QPST\_bin Folder အောက်မှာ QFIL.exe ဆိုတဲ့ Program တွေ့မှာပါ။ အဲဒါကို Double Click လုပ်ပြီးသာ Run ပေးလိုက်ပါ။ ကျနော့် ကွန်ပျူတာက Windows 64bit မို့ C:\_Program Files (x86)\_Qualcomm\_QPST\_bin Folder မှာ QFIL.exe ကိုတွေ့နေရတာပါ။ Widnows 32bit computer တွေမှာတော့ C:\_Program Files\_Qualcomm\_QPST\_bin Folder အောက်မှာတွေ့မှာပါ။
QFIL Main Window ပွင့်လာပါပြီ။
Flat Build (1) ဆိုတဲ့ Option ကိုရွေးပါ။ Select Programmer နေရာမှာ Programmer file ကိုရွေးပေးဖို့ Browse Button (2) ကိုနှိပ်ပါ။
ကွန်ပျူတာမှာ ဖြည်ချထားတဲ့ Firmware Folder အောက်က images folder အောက် က file ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။ Filename တွေ၊ File type တွေ စဉ်းစားနေစရာမလိုပါ။ Firmware folder အောက်က images folder အောက်ဝင်လိုက်တာနဲ့ Programmer file ကိုတွေ့မှာပါ။ ဖုန်း CPU model ပေါ်မူတည်လို့ Programmer file name က အခုနမူနာပြထားတာနဲ့ ထပ်တူတူမှာ မဟုတ်ပါ။ Xiaomi Forum ကနေ download ဆွဲထားတဲ့ official firmware ဆိုရင် လိုအပ်တဲ့ file တွေ အကုန်ပါနေမှာပါ။ သည်နေရာမှာ Mi Flash Tool နဲ့ မတူတဲ့အချက်က Mi Flash Tool က Firmware Folder ထိပဲရွေးပေးထားဖို့လိုတာပါ။ QFIL ကတော့ Firmware folder အောက်မှာရှိတဲ့ images folder အောက်က files တွေနဲ့သာ အဓိက အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ပြီးရင် EMMC မှာ image file တွေကို ဘယ်လိုရေးပါ...စတဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေပါတဲ့ XML file တွေကို ရွေးပေးရပါမယ်။ Load XML button ကိုသာနှိပ်လိုက်ပါ။
Images folder အောက်က Programmer file ကိုရွေးထားပြီးသားဖြစ်လို့ အဲသည်နေရာပဲ ပြန်ပွင့်လာပါမယ်။ QFIL ကလိုအပ်တဲ့ rawprogram0.xml file ကို တွေ့နေရမှာပါ။ ရွေးပြီး OK နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
နောက်ထပ် xml file တစ်ခုဖြစ်တဲ့ patch0.xml file ကို ရွေးခိုင်းတဲ့ Windows အလိုလိုပေါ်လာမှာပါ။ Xiaomi forum က download ပြုလုပ်ထားတဲ့ Official fastboot rom တွေမှာ အဲသည် file တွေ အပြည့်အစုံပါပြီးသားပါ။ file ကို select လုပ်ပြီး OK button သာနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
QFIL နဲ့ firmware တင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ Programmer file, XML Files တွေကို ရွေးချယ်ပေးလို့ ပြီးပါပြီ။
ဖုန်းကို EDL mode ၀င်လိုက်ပါ။ ကွန်ပျူတာနဲ့ USB cable သုံးပြီး ချိတ်လိုက်ပါ။ QFIL Windows မှာ QDLoader Device တစ်ခု Detect လုပ်ပြီး တွေ့လာတာကို ပြပါလိမ့်မယ်။ Qualcomm CPU Base ဖုန်းတွေကို EDL mode ၀င်တာ သည်နေရာမှာ Coming Soon... လေ့လာကြည့်ပါ။
အားလုံး အဆင်သင့် ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ Firmware ရေးခိုင်းဖို့ Download ဆိုတဲ့ button လေးသာနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
နောက်ဆုံးမှာတော့ Firmware တင်ခြင်း အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးပါပြီ။
အားလုံးပြိးဆုံးချိန်မှာတော့ ဖုန်းကို USB Cable ဖြုတ်..၊ Vibrate တစ်ချက်တုန်သည်ထိ Power ခလုတ်ကို ကြာကြာလေးသာနှိပ်ထားပေးလိုက်ပါ။ ၁၀ မိနစ်လောက်ကြာရင်တော့ Setup Wizard ပေါ်လာပြီး ဖုန်းကို ဆက်လက်အသုံးပြုဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။
QFIL နဲ့ firmware တင်ရာမှာ Windows 64bit computer မှာ Mi Flash 64bit နဲ့ firmware တင်သလိုပဲ ရေးချိန်မြန်ဆန်ပါတယ်။ ၅ မိနစ်ဝန်းကျင်ပဲကြာပါတယ်။ Windows 64bit မှာ .NET framework သုံးတဲ့ Mi Flash Tools တွေလို USB Data Transfer နှေးပြီး firmware ရေးချိန် ကြာတာမဖြစ်ပါ။ Mi Flash Tool တွေ အဆင်မပြေချိန် အပြောင်းအလဲသုံးနိုင်တဲ့ Tool တစ်ခုပါ။ Qualcomm EMMC အတွက် Qualcomm ကထုတ်တဲ့ Tool မို့ အဆင်ပြေပါတယ်။ တစ်ခုမှတ်ထားရမှာက ဖုန်းကို EDL mode ၀င်ပြီးပဲ firmware ရေးရမှာပါ။
[ PDF Download Link for This Article ]
Credit : Xiaomi Knowledge
Boss Style Firmware Phone Application
Maung Pauk at 8:30:00 AM 0
ရှားပါး Firmware ဖြစ်တဲ့ Boss Style A1 Firmware ကို Free Download ရယူနိုင်ဖို့ပါ..
Boss Style A1 Firmware : 343.1 Mb
ရှားပါး Firmware လေး. Boss Style A5 Firmware Free Download ရယူနိုင်ဖို့ပါ..
Download Boss Style A5 Firmware : 444.7 Mb
Maung Pauk at 7:40:00 AM 0
ရှားပါး Firmware လေး Boss Style A3S Firmware Free Download ရယူနိုင်ပါပြီ...
Boss Style A3S Firmware : 352 Mb
Sky Net အားကစားလိုင်းတွေ နဲ့ အခြား အားကစားလိုင်းတွေ အပြင် အခြား ရုပ်သံလိုင်းကောင်းကောင်းလေးတွေကို ဖုန်းပေါ်ကကြည့်မယ်ဆို
Maung Pauk at 12:53:00 PM 0
ဘေလ်သောက်သောက်လဲအကုန်ခံပြီး ကြည့်ဖို့ ဟောဒီ apk ကိုဒေါင်းထားလိုက်..
Skynet Sport1 ,2,3,4,5,6 နဲ့ HD လိုင်းတွေအကုန်ကြည့်လို့ရတယ်..
အခြား ကောင်းတာတစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်..သူက လိုင်းစုံ sport လိုင်းတွေအပြင် MOVIE,MUSIC,DOCUMENTRYစတဲ့အမျိုးအစား လိုင်းတွေပေါ့ နာမည်ကြီးချန်နယ်တွေအများကြီးပါတယ်..ဆောင်ထားသင့်တယ်...
ပြီးရင် ဘေလ်လေးတော့ ၀ယ်ထားကြပါ..အားတီအပေါင်းတို့..
live net tv တဲ့..အဲဒါကိုတော့ ဒီမှာဒေါင်း(6MB)
ဒီ app မှာ..Premierleague,Bundesliga,Laliga,Ligue,FA cup,EFL,Spain Copa delray,Copa Italia,Serie A ,Ligue cup စတာတွေကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ app က web view ပုံစံဖြစ်ပြီး...channel တွေကို နေ့စဉ် အပ်ဒိတ်လုပ်လေ့ရှိပါတယ်...။လိုင်းအသစ်တွေ နေ့စဉ်တိုးလာလေ့ရှိပြီး Skynet Sport channel တစ်ချို့လည်းပါဝင်ပါသေးတယ်။ Bein sport အမည်တပ်ထားပေမယ့် တခြား Espn ,fox sport တို့လိုကောင်တွေအပြင် ထိုင်း လိုင်း True7,PPTT .Korea တွေပါပါသေးတယ် ။ထူးခြားတာက
ဘောလုံးပွဲ.လက်ဝှေ့ပွဲတွေအပြင် Movie channel,Documentry ,Music နဲ့ ကာတွန်း channel တွေလည်းပါဝင်သေးလို့.
update လုပ်လိုက်တဲ့ ချန်နယ်တွေမှာ တစ်ခါတစ်လေ playboy,penhouse လိုင်းတွေပါပါလာတတ်တာကတော့ ကိုယ့်ကုသိုလ်လိုမှတ်ပါ။
-ခရစ္စတိုဖာ ကြွက်နီ ဆိုတာ Hanwailinn Wailinn Aung :D
Error Solution Files Phone Application
Huawei G6-U00 ​တွေကို EMMC လဲပြီး IMEI , Noti , Theme , Internal Storage ​Error ထပ်​မံရှင်းစရာမလို​ပဲ Boardsoftware ​ရေးမယ်​
G6-U00 ​တွေရဲ့ Original EMMC ရဲ့ user size က 3.909 GB ဖြစ်​ပြီး​တော့ အသစ်​ကပ်​တဲ့ EMMC ​တွေက 3.875 GB ဆို​တော့ Block0​ရေးရင်​လည်း Internal Storage error တက်​ပါတယ်​
OEM zip ကို Download ဆွဲပြီး ဖြည်​လိုက်​ပါ ။ oeminfo.mbn ထွက်​လာပါမယ်​။
အဲ့ဒီ oeminfo.mbn ကို G6-U10 BoardSoftware ရှိရင်​ အဲ့ BoardFirmware ရဲ့ fastbootimage ဖိုဒါထဲက oeminfo.mbn ​​နေရာမှာ အစားထိုးလိုက်​ပါ။
ပြီးရင်​ အဲ့ဒိ BoardSotware ကို ​ရေးပါ၊ ပြီးရင်​ UPDATE.APP Buildnumber B133 နဲ့ Firmware ထပ်​တင်​​ပေးပြီးတာနဲ့Imei ,noti ,theme , internal storage အားလုံးအဆင်​​ပြေပါလိမ့်​မယ်​
Credit : Android Service & Kaung Myat
Download OEM Info.zip : 159.92 Kb
G6-C00 Board Firmware Download
Computer software Windows Repair
Windows 8, 8.1, 10 တွေမှာ ဓာတ်ပုံတွေကို Windows Image Viewer နဲ့ ဖွင့်လို့မရခဲ့ရင် ဖြေရှင်းဖို့
Maung Pauk at 12:09:00 AM 0
Windows 8, 8.1, 10 တစ်ခုခုမှာ ဓာတ်ပုံတွေကိုဖွင့်တဲ့အခါ Windows XP, Windows7တုန်းကလို Windows Image Viewer နဲ့မပွင့်ဘဲ Picasa လို အခြား Image Viewer နဲ့ပဲပွင့်ပွင့်နေလို့ Windows Image Viewer နဲ့ ပွင့်စေချင်ရင် အောက်က Registry လေးကို ဒေါင်းပြီး Double Click သာ ခေါက်ပေးလိုက်ပါ.. အဆင်ပြေသွားပါမယ်...
Download Windows Image Viewer Reg: 549 Byte
Internet Download Manager နောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်း 6.27 Build3ကို Full Version ဖြစ်အောင် Patch နဲ့တကွ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. Setup နဲ့ Install လုပ်.. ကွန်ပျူတာရဲ့ ညာဘက်အောက်ခြေနားက Tray ထဲမှာ IDM လေးရှိနေရင် ညာကလစ်ထောက်ပြီး exit ကိုနှိပ်..
Patch ထဲက 1 ကို Double Click ခေါက်.. ပထမ နာမည်၊ ဒုတိယနာမည်ပေးပြီး Patch လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ...
Crack, Patch and Pirate Software are not illegal.
You should buy genuine Licensed software legally.
Rar password is www.maungpauk.org
Download IDM 6.27 Build3Setup : 6.6 Mb
Download Patch Only : 407.5 Kb
Samsung FRP တွေကို ဖြုတ်နိုင်မည့် Tool တစ်ခု (Easy Way)Samsung All Model support All android OS FRP Remove
Thiha Htike at 11:19:00 AM 0
ယခု process အားဆင်နွဲရန် .Net Framework လိုအပ်ပါတယ်။
ထိုထဲတွင် license key အဟောင်းကိုဖြုတ်ပြီးအောက် download ဆွဲထားတဲ့ New license key ကိုထည့်ပါ။
-FRP ဖြုတ်မည့် ဖုန်းထဲသို့ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော SIM တစ်ကဒ်ထည့်ပါ။
-ဖုန်းကို WIfi ဖြင့်ချိတ်ဆက်ပါ
-samsung modem com port သိမသိ Device Manager သို့သွားပါ(Start-Computerပေါ် Right Click နှိပ် Manage ကိုနှိပ်ပါ)
-Downlaod ဆွဲထားသော FRP Remove Tool ကိုဖွင့်ပါ။
-Makecall Buttom ကိုမနှိပ်မှီ +959 ရှေ့မှာ မိမိထည့်ထားသော ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်လိုက်ပါ။
-SMS box မှာ www.google.com ကို ရိုက်ပြီး Send SMS နှိ်ပ်လိုက်ပါ။
-Web Browser ပွင့်လာရင် rootjunkysdl.com ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။
-အပေါ်က Address ကိုဖွင့်ပြီး app ကိုinstall တင်ပြီးရင်တော့ မိမိ gamil acc ကို login လုပ်ပါ။
-Restart ချလိုက်ပါ ကဲ မိမိ FRP ပြုတ်ပါပြီ။
Rooted ဖြစ်ပြီးသား Android phone တွေကို CMD ကနေ Virus သတ်မည်။
Thiha Htike at 11:18:00 AM 0
မင်္ဂလာပါ ဒီနည်းလေးကတော့ Rooted ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ရမယ် ။USD Deubbing လုပ်ထားရမယ်။ဒါဆိုရပြီ
အောက်မှာ လုပ်ပုံလုပ်နည်းကိုပုံနှင့်တကွ စာနဲ့အတူရေးပေးထားပါတယ်။
Adb Driver Download မရှိသေးရင် Download လုပ်ပါ
ADB Driver ကို ဒေါင်းပြီးနောက် Folder တစ်ခုထဲတွင် ဖြည်လိုက်ပါ Extract လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။
Shick Key နဲ့ Mouse က Right Click ကိုနှိပ်ပေးပါ Commend Box ပွင့်လာပါလိမ့်မယ် ဖုန်းကို PC နဲ့ချိတ်ဆတ်
လိုက်ပါ ပြီးရင် Commend box မှာ adb devices လို့ရိုက်ခေါက်လိုက်ပါ
အောက်ကအတိုင်းပေါ်ရင် detected သိရင်အောက်ကအတိုင်းပေါ်ပါမည်။
adb shell su -c ls /data/data/ > data.txt
adb shell su -c ls /data/app/ > app.txt
adb shell su -c ls /data/app-private/ > priv.txt
adb shell su -c ls /system/app/ > systemapp.txt
adb shell su -c ls /system/priv-app/ > systempriv.txt
အပေါ်က Common ကိုရိုက်ခေါက်ကြည့်ပါ ။ ရိုက်ထည့်ပြီးရင် ကျွန်တော်ပြောတဲ့ Adb Folder ထဲမှာ
အောက်က ပုံထဲက .txt file တွေတွေ့လားတစ်ချက်ကြည့်ပေးပါ။
တွေ့ပါ သလားအပေါ်က အတိုင်းတွေ့ရင်တော့ပထမနည်းပြောပေးပါ့မယ်။
အနီရောင်နဲ့ဝိုင်းထားတဲ့4txt file ကို Notepad ဖြင့် ဖွင့်လိုက်ပါ။ အောက်ကပုံအတိုင်းထွက်လာသလား
အပေါ်က Application name list များကိုတစ်ချက်သေချာကြည့်ပါ။ ထိုထဲမှာ suspicious app ကိုတွေ့ပါသလား
တွေ့ရင် အောက်မှာထပ်ပေးထားမည့် Common ထဲမှာ ထို Application name ကိုထည့်ပြီး Delete လုပ်ပါ
Apk file ကို Delete လုပ်ဖို့အောက်က common ကိုရိုက်ပြီး delete လုပ်ပါ။
adb shell su -c rm /system/app/AllshareMediaShare.apk
adb shell su -c rm -rf /system/app/AssistantMenu_M
ကဲ ထိုအတိုင်းlist မှ name များကို delete လုပ်ပါ ။ Reboot ချလိုက်ပါ ကဲ Virus မရှိတော့ပါဘူး။
Android Root PC Software Root Tools
Ye Naing at 5:08:00 PM 0
Korea Region _ Android Version 5. . . . နှင့်6. . .
Samsung ဖုန်းအများစုကို ( အားလုံးမဟုတ်ပါ )
TWRP_Odin Flash နည်းလမ်းနဲ့ ROOT SUCCEED လုပ်ပေးနိုင်၏ ။
< မှတ်ချက် ။ ။ Need Internet >
Android Root Samsung Rooting
Ye Naing at 4:50:00 PM 0
2016 Korea Region _ Galaxy Tab A6 LTE SM-T285 အတွက်
TWRP recovery image နှင့် root zip ပါ။
Odin မှ flash ရန် TWRP recovery image
Recovery မှ flash ရန် Super SU root zip